Isamsung iya kuvula i-Bixby API kubaphuhlisi | I-Androidsis
Isamsung iya kuvula i-Bixby API
I-Bixby ngumncedisi we-Samsung, ivuselelwe kweli hlobo, Kwilinge lophawu lwaseKorea lokunika inkuthazo entsha. Oko yasungulwa, indlela eya kwintengiso khange ibelula. Ukunqongophala kweelwimi kuyiphazamise kakhulu inkqubela phambili kwilizwe jikelele. Ke ngoko, uninzi lwabasebenzisi abanefowuni evela kwinkampani yaseKorea babebheja khubaza kwifowuni yakho.
Isamsung yenza konke okusemandleni ukuyiqhubela phambili ukuze ikwazi ukukhuphisana nabanye abancedisi abanjengo-Alexa okanye uMncedisi kaGoogle. Ke ngoko, ngoku babhengeza isigqibo sabo esitsha malunga noku, I-Bixby API iyavula. Oku kuyakunika abaphuhlisi ukufikelela kuyo, olu lutshintsho olukhulu kwinkampani.
Esi ayisosigqibo siphambeneyo, kuba i-Samsung ifuna ukuba umncedisi abekho zikhona kwiimveliso zakho kwiminyaka embalwa. Ke igalelo lonjiniyela izokuvumela ukuba ufumane okungakumbi kwi-Bixby kwiimeko ezininzi. Ingakumbi ukuba ufuna ukuthatha ithuba layo kwikhaya elixhumeneyo.
Isabelo sentengiso esiphantsi anaso umncedisi, yi-6% kuphela e-United States, xa kuthelekiswa nabantu abakhuphisana nabo uGoogle Assistant kunye ne-Alexa, sesinye sezizathu eziphambili zokuqina kweKorea. Ukuba unobudlelwane obuhle kunye nabaphuhlisi, unokufumana amandla afanelekileyo kumncedisi wakho, yile nto i-Samsung iqondileyo ekugqibeleni.
UGoogle kunye neAmazon bayayazi indlela yokuvula izixhobo zabo kubantu besithathu ngeziphumo ezilungileyo. Ke ngoku lithuba lika-Samsung lokwenza okufanayo nge-Bixby, ngethemba lokuba inokwenza ukutsiba kwintengiso kunye nenani labasebenzisi abayamkelayo likhulu. Ngelixa ukhuphiswano luyoyikeka.
Ngelo xesha asazi ukuba ezi zinto zintsha ziya kuqala nini ukufika kwiBixby. Ezi ziindaba ezimnandi, ezinokuphawula ukuqala kwesahluko esitsha somncedisi we-Samsung, ke siyakubukela inkqubela phambili yayo kwintengiso kwiinyanga ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Isamsung iya kuvula i-Bixby API
Uzihlela njani izihloko kwiTelegram